Kulamadii ugu dambeeyay ee Champions League - BBC News Somali
Kulamadii ugu dambeeyay ee Champions League
15 Maarso 2018
Xalay waxaa la ciyaaray labadii kulan ee ugu dambeeyAy isreebreebka tartanKa rubac-dhammaadka koobka UEFA champions league, waxaana wada ciyaaray kooxaha kala ah Barcelona oo la ciyaartay Chelsea iyo Besiktas oo la ciyaartay Bayern Munich.
Waxaa tartanka isaga haray koox kale oo ka mid ah kooxaha ka dhisan Britain, waa kooxda Chelsea oo xalay 3 iy 0 ay ku garaacday kooxda reer Spain ee Barcelona.
Kulanka oo ka dhacayey garoonka kubadda cagta ee Barcelona, qaybta hore ee ciyaarta waxaa daqiiqaddii 3-aad goolka koowaad u daah furay ciyaaryahan Lionel Messi, waxaa ku xigsaday oo gool labaad u dhaliyey Barcelona daqiiqaddii 20aad ciyaaryahan Dembele, qaybtii hore ee ciyaarta waxaa lagu kala nastay 2 iyo 0 ay ciyaarta ku hoggaaminaysay kooxda Barcelona.
Qaybtii 2-aad ee ciyaarta markii la isu soo noqday waxaa daqiiqaddii 3-aad markale gool u dhaliyay kooxda Barcelona ciyaaryahan Lionel Messi, goolkaas oo natiijada ciyaarta ka dhigay 3 iyo 0 oo ay ku adkaatay kooxda kubadda cagta ee Barcelona.
Ciyaar yahan Lionel Messi wuxuu xiray goolkiisii 100-aad ee UEFA Champions Leuge-ga.
Ugu dambeytiina wax la sugaaba waa isku aadka kooxaha u soo baxay rubac-dhammaadka tartanka koobka UEFA Champions League - ga ee kala ah: